Ny antsipiriany momba ny haben'ny efijery vaovao amin'ny iPhone 14 Pro sy 14 Pro Max | iPhone News
ny tsaho manodidina ny endrika vaovao amin'ny iPhone 14 no filaharan'ny andro. Ny feo dia mahazatra: Apple dia mikasa ny handefa fitaovana miaraka amin'ny endrika mitohy afa-tsy ny fanesorana ny notch amin'ny iPhone 14 Pro sy Pro Max. Farany, ny paoma lehibe dia hanavaka ny modely 'Pro' mihoatra lavitra noho ny fakantsary fahatelo aoriana. ary mahavita izany endrika vaovao miendrika pilina eo anoloana. Ora vitsy lasa izay, nisy tatitra nivoaka izay nipoitra ny haben'ny efijery an'ireo modely Pro tsy misy notch ireo ary hitantsika fa tsy mitombo be ny habeny fa eo amin'ny sehatra fiasa dia mazava fa hisy ny fiovana.
Fiovana kely amin'ny haben'ny efijery iPhone 14 Pro sy Pro Max
Ny iPhone 14 vaovao dia ho tonga amin'ny volana septambra. Mandra-pahatongan'izany, dia mbola lavitra ny lalana tokony halehantsika mifototra amin'ny fivoahana, tsaho ary hevitra izay hanoritra, indrindra fa ny hoavin'ny finday Apple. Ny mazava amintsika hatreto dia izay ny iPhone 14 dia hanomboka fanovana tsingerina ampahany manafoana ny tady amin'ny terminal Pro.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia nanapa-kevitra i Apple esory ny notch izay niseho voalohany tamin'ny iPhone X amin'ny iPhone 14 Pro sy iPhone 14 Pro Max. Miaraka amin'izany, ny paoma lehibe dia mitondra fiovana lehibe eo amin'ny haavon'ny famolavolana momba ny dikan-teny mahazatra sy ny Max. Fa koa, manao veloma hiarahaba ny notch endrika vaovao miendrika 'lavaka + pilina'. Ity famolavolana vaovao ity mampitombo kely ny haben'ny efijery.
Araka ny angon-drakitra farany nomen'ny mpandinika Ross tanora ao amin'ny kaonty Twitter-ny dia ireto ny refy:
Raha ampitahaina ireo habe ireo amin'ny iPhone 13 Pro sy Pro Max amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny notch, dia hitantsika fa zara raha misy fiovana lehibe eo amin'ny haben'ny efijery:
Ndeha ho tadidintsika koa izany Ny bezels iPhone 14 dia ho boribory kokoa sy tery kokoa. Na dia tsy miteraka fiovana lehibe eo amin'ny haben'ny tontonana aza izany, amin'ny sehatra hita maso dia afaka manonta fiovana lehibe izay mahatonga ny fitaovana ho lehibe kokoa. Fotoana izao handinihana ny mety hisian'ny efijery amin'ny haavon'ny rindrambaiko izay omen'ny Apple ny fitomboan'ny efijery iPhone 14 Pro sy Pro Max. Ho hitantsika amin'ny farany ve ny isan-jaton'ny bateria eo akaikin'ny kisary ao amin'ny bar sata? Ataovy ny filokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 14 » Ny antsipiriany momba ny haben'ny efijery vaovao amin'ny iPhone 14 Pro sy 14 Pro Max